पाइलामा हिउँ, आँखामा हिमालय | राजेन्द्रमान डंगोल
पाइलामा हिउँ, आँखामा हिमालय
नियात्रा राजेन्द्रमान डंगोल August 11, 2020, 5:18 pm
घामको किरणले कङ्गारु हिमालको शिर नचुम्दै छोड्न लागेका थियौँ नारगाउँ ।
बेलैमा पुग्नु थियो, काङ लाको निम्तो मान्न । काङ लाको आतिथ्य, हामी अतिथि । के चाहियो र ! मनभरि थियो खुसी र कुतूहल । सरासर काङ लाको आँगन पुगेर अन्तिम पटक हेर्नु थियो धीत मर्नेगरी नार–फुको सेरोफेरो । ग्रहण गर्नु थियो काङ लाको न्यानो आतिथ्य । पिउनु थियो पेटभरि, हिमाली सिरेटो ।
“अब कहिले आउनु हुन्छ त ?” शान्ति होटलका सञ्चालक नीमा घलेलेको प्रश्न मलाई ।
“नमरी बाँचे, कालले साँचे अर्को वर्ष दाइ । तपाईंहरूको घोडेजात्रा हेर्न मन छ मलाई ।” मेरो जवाफ ।
“नारफुमा बस्ने हामी नयाँ वर्षको स्वागतमा ल्होसार मनाउछौँ । आपसमा शुभकाना साटासाट गर्छौँ । दर्जी(तिरहान्ने पर्व) पनि हुन्छ । फल्याकमा राक्षसको चित्र राखिएको हुन्छ । हामी त्यसैलाई ताकेर वाण हान्छौँ । सहभागीहरूका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ठीक ठाउँमा विशाना लगाउन सक्नेले पुरस्कार पाउँछ । नार र फुमा अन्नबाली लगाइसकेपछि ‘छे कोरो पर्व’ मनाइन्छ । यो बेला धार्मिक ग्रन्थ बोकेर खेतबारी र गाउँ घरमा परिक्रमा गरिन्छ । यसो गर्दा गाउँलेलाई शुभ हुने, बालीमा किरा नलाग्ने र उत्पादन राम्रो हुने विश्वास गरिन्छ । वर्षा लाग्नु अघि घोडेजात्रा पनि हुन्छ । हामी एकै ठाउँमा भेला भएर घोडा दौडाउछौँ ।” हिजो धर्मशाला छाड्नुअघि फुन्चोक ठीन्लेले भनेका थिए ।”
उनले त भनेका थिए– “ह्युम पूजा र माने (स्याप)नाच, पनि हुन्छ । प्रत्येक वर्ष हिउँ पर्नुअघि गाउँ छोड्दा विधिवत् पुजा हुन्छ ।”
“संमृद्ध छौँ हामी संस्कृतिमा । फुमा मनाइने ताक्र्ये पर्व र नारको छे कोरो र घोडेजात्रालाई पर्यटनसित जोड्न सके राम्रो हुन्छ । छे कोरो पर्वलाई निरन्तरता दिने कोशिस गर्नु होला ।” मेरो सुझाव ।
स्वीकारोक्ति थियो नीमा दाजुको ।
“ल राम्ररी जानुस् है ! केही समस्या परे फोन गर्नुहोला ।” बिदाइ गर्दै भने उनले ।
“काठमाडौँ आउँदा भेट्नुपर्छ नि !” बिदा माग्दै भनेथेँ मैले ।
मनमा लागिरहेको थियो– औपचारिकतामात्र नभएर उनीहरूलाई कुनै दिन अतिथिकै रूपमा स्वागत गर्न पाए हुन्थ्यो ।
एकाबिहानै के रुच्नु ! बानी भए पो ! जबरजस्ती एक कचौरा पोरिज र एक कप चियाको नास्ता गरेको थिएँ । बाटोमा भोक लाग्ला भनेर शान्ति दिदी र निमा दाइले उसिनेको अण्डा र रोटीको पोको हातहातमा थमाए हामीलाई । पाहुना खुसी पार्ने कस्तो कायदा ! दिएर र खाएर त कहिले कसलाई पो पुग्छ र ! सबैभन्दा ठूलो कुरा त बोलिबचन नै रहेछ । बोलिबचनमा मिठास भए मात्र पनि लाख हुँदोरहेछ । सबै ठाउँका होटलवालाहरू यस्तै भइदिए पो ! मेरो एकालाप ।
नजरबाट छेलिए पनि मनबाट माया छेलिएन नारगाउँको, जसरी छेलिएन कङ्गारु हिमाल र पिसाङचुलीको । हिमालमै सल्बलाइरहेझैँ लाग्थ्योे शान्ति दिदी र निमा दाइकोे प्रतिविम्ब ।
४,११० मिटरबाट पुग्नु छ ५,३२० मिटरको उचाइ र फेरि झर्नु छ ङवाल ३,५०० मिटरमा । लामै छ आजको यात्रा । हामी पाँच नबज्दै निस्किसक्नुपथ्र्यो । ढिला त भएकै हो । अझ हिजो काङ ला फेदीमै बास बसेको भए निकै नै छोटिन्थ्यो बाटो । नार आइपुग्ने बेलामा एक जनाले सल्लाह नदिएको त होइन तर त्यति सुन्दर नारगाउँ छाड्न मनले नमानेपछि के गर्नु !
हाम्रो यात्राको दोस्रो गन्तव्य थियो– नारगाउँ । नारफेदीमा बसेको साँझ सादेगुम्बाका लामाले भनेका थिए– तिब्बतबाट आएका नार वंशावलीका तीनभाइ त्यहाँ आएर बसेपछि गाउँको नाम नार हुन गयो । उनीहरूको धर्म नारफोबे भएकोले गुम्बाको नाम पनि नारेकाकी छोलिङ गुम्बा भनेर राखियो ।’
नीमा घलेसँग नारको अर्थ सोधेको थिएँ, नार आइपुग्नेबित्तिकै ।
‘काङ लातिरबाट आएका सिकारीले नाउरको सिकार गरेछन् । बाणले घाइते नाउर छटपटाउँदै यहाँ आइपुगेपछि मरेछ । नाउर मरेको ठाउँ भएकोले यो ठाउँलाई नाउर भनिन थाल्यो । नाउर भन्दाभन्दै नार भएको रे ।’ भिन्न थियो उनको कथन ।
तर, दुवै मिथक सही लाग्ने । जेजे भएपनि यो ठाउँको नाम नार नै हो । फेरि अपभ्रंश भएर अर्कै नाम त नरहला कि ! मेरो मनको कुरा ।
हठात् आएको फिलिपको यादले नरमाइलो भइरहेको थियोे, केही हराएजस्तै । बिचरा फिलिप ! मेरो ‘ड्रिम डेस्टिनेसन’ भन्थे । यात्रा पूरा नगरीकनै फर्कनु प¥यो । निर्दयी कालले पनि असमयमै लगिदिन्छन् मान्छेलाई । बज्रपात सहनुपर्छ मान्छेले जीवनमा । उन्नाईस वर्षदेखि थाती रहेको उनको स्वप्न गन्तव्यमा पाइला टैक्दै थिए उनी । कस्तो दुर्भाग्य ! फेरि थाती रहन गयो उनको सपना । थाहा छैन– उनका लागि यो दिन फेरि आउने हो कि होइन । उनका स्नेही यादहरू सँगालिरहेको छु मानसपटलमा ।
हिजो मज्जाले आराम गरेकोले ज्यान हल्का भएको छ । अझ रातमा राम्ररी निदाउन सकेको भए त झन् कस्तो हुन्थ्यो होला । नारफेदीमा ओढ्ने गतिलो नभएर निदाउँन सकिएन । नारमा उचाइको कारणले निदाउँन सकिएन । उचाइमा आएर मज्जाले निदाउँछु भन्नु चाहिँ मनको लड्डु घ्यूसित खानुजस्तै रहेछ ।
दिनभरि पग्लने रातभरि जम्ने । जमेका थिए पानीका खोल्सीहरू सिसाजस्तै भएर । चट्टानजस्तै कडा भएको छ माटो पनि । हिँड्दा ‘च¥यापच¥याप’ आवाज आउँछ । बाटैभरि पातलो हिउँ छरिएको छ । घामको किरण नलुट्पुटिएकोले हिँड्न सजिलो छ ।
शान्ति दिदीले भनेकी थिइन्– ‘यसपालि हिउँ पर्न ढिलो भयो । अस्ति भर्खरमात्र पहिलो पटक परेको हो । हिउँ बाक्लो नभएकोले हिँड्न सजिलै हुन्छ । चिन्ता नगर्नुस् ।’
नारबाट काङ् ला पुगेर फेरि नार फर्केका दुई स्लोभेनियालीलाई अघिल्लो साँझ डाइनिङ भेटेका थियौँ । बिहान छ बजे निस्केर काङ ला पुगीकन चारबजे नै नार फर्किसकेका थिए । उनीहरू उही स्लोभेनियालीहरू थिए जसलाई दुई दिनअघि फुबाट आउँदा च्याखुको लन्चमा भेटेका थियौँ ।
उनीहरूले भनेका थिए– ‘पाँचहजार मिटरभन्दा माथि हिउँ बाक्लो छ ।’
युवावयदेखि नेपालमा पदयात्रा गर्न सुरु गरेका यी दुईले सत्तरी वर्ष शिशिर पार गर्दा पनि यात्रा गर्न छाडेका छैनन् । मान्नैपर्छ उनीहरूको क्षमता र पदयात्राप्रतिको मोहलाई ।
मैले सोधनी गरेको थिएँ– “यो उमेरमा पनि पदयात्रा गर्ने यत्रो जाँगर ?”
“हामी हरेक दिन चालीस किलोमिटर हिँड्छोँ ।” उनीहरूको जवाफ ।
यात्रालाई उमेरले कहाँ छेक्दोरहेछ र ! उनीहरूलाई देख्दा जागेको आत्मविश्वासले काम गरेको छ हामीलाई ।
राजमार्गजस्तै फराकिलो पदमार्गमा हिँडिरहेका छौँ हामी । जतिजति माथि गयो उतिउति हिउँको सघनता पनि बढ्दै छ । हिमउद्यानभित्र पसेजस्तै महसुस भइरहेको छ । पाइलाभरि हिउँ, आँखाभरि हिमाल । जतिजति घामको किरण फिँजियो त्यति नै उजेलिँदै छ परिवेश । र, फर्काउँदै छ प्रकाश हामीतिरै । अनुहारभरि दलेको छु ‘मोस्चराइजिङ क्रिम’ परावर्तित किरणबाट गालाको छाला जोगाउन ।
हिउँलाई टाढाबाट हेर्नु एउटा कुरा । हिउँसम्म पुगेर हिउँलाई सुम्सुम्याउनु, खेल्नु र महसुस गर्नु पनि एउटा कुरा । तर हिउँको सङ्गत गर्नु नितान्त अर्कै कुरा । हो, हिउँ भोग्न हिउँसित सङ्गत गर्नैपर्छ । अझ हिमालमै बस्नुपर्छ । अनि मात्र थाहा हुन्छ हिउँको क्रूरता र निष्ठुरता । आफू तात्न नसके मान्छेलाई चट्टान बनाइदिन्छ हिउँले । जोगिन सक्नुपर्छ हिउँसित, नत्र खाइदिन्छ हात, खुट्टा र बनाइदिन्छ आँखालाई अन्धो ।
दायाँतर्फ चट्टानी पहरा पसारिएका, बायाँपट्टि जोङ रिदेखि काङ लासम्मका चुचुराहरू लहरै उभिएका । बिहानको भन्दा भिन्दै रूप धारण गरिसकेका छन् हिमालहरूले । ती सुन्दर दृश्यहरूको तस्बिर लिन मन लाग्छ तर बाक्लो पञ्जाभित्र लुकेका मेरा हातहरू बाहिर निस्कन मान्दैनन् ।
नौ बज्दा काङ्ला फेदी(४,५३० मिटर) पुगियो । फेदी भन्नेबित्तिकै साँघुरो ठाउँ होला भन्ठानेको थिएँ । तर फराकिलो रहेछ । यति फराकिलो ठाउँमा थियो एउटै मात्र चिया घर । त्यो पनि रित्तै । हिजैमात्र यसका सञ्चालक नार झरेका । अब चार महिनाको लागि रित्तै रहन्छ यो घर । हिजो यतै बस्न पाएको भए आज आधाबाटो काटिसकिने रहेछ भन्ने पनि लागिरहेछ । मनमा पनि केके तरङ्ग उठ्छ केके !
उचाइ अनुकूलनको लागि उत्तम ठाउँ हो काङ् ला फेदी । नारको विकल्पको आश्रय पनि । नारमा जत्तिकै होटलहरू हुनुपर्ने हो यहाँ तर छैनन् । अन्नपूर्ण चक्रीय मार्गमा जस्तै पर्यटकहरूको प्रवाह हुने भए त थोरङ फेदीमा जस्तै लगानी गर्थे होलान् मान्छेहरूले ।
सुनेको थिएँ– हिउँचितुवाको बस्ती पनि हो यो क्षेत्र । दर्शन त कहाँ पायौँ र हिउँ चितुवाको ! एकजोडी नाउर भने बुर्कुसी मार्दै बाटो छेक्न आइपुगे । मेताबाट क्याङ जाँदा त थुप्रै जोडी भेटिएका थिए । सोचेँ– नाउरजोडीको सट्टा हिउँचितुवा यसरी सामुन्ने आइदिएको भए के हालत हुन्थ्यो होला हाम्रो !
हिउँचितुवाको संसारमा नाउरहरू पनि ! अचम्भित हुँदै म बोलेँ ।
नाउरहरू भएरै त हिउँचितुवा पनि भएको होला नि । जयको प्रतिक्रिया ।
हुन पनि हो । नाउर नहुँदो हो त हिउँचितुवाको जीवनचक्र कसरी चल्नु ! हिउँचितुवाको जीवनका लागि जीवन समर्पण गर्नुपर्छ बिचरा नाउरहरूले । प्रकृतिको नियाँ !
निकैबेर मुखामुख ग¥यौँ हामीले नाउरजोडीसँग । लजाएजस्तै, केही कुरा भन्न खोजेझैँ प्रतीत हुन्थ्यो तिनलाई देख्दा । सायद आजको मौसम राम्रो रहने सन्देश दिँदै थियो कि !
जता हे¥यो ढुङ्गैढुङ्गा छ; त्यसमाथि पनि हिउँ परेको । खै, के खान्छन् कुन्नि ! हेर्दा त खिरिला देखिन्छन्, दशैँका लागि पालेको खसीजस्तै । उचाइमा बस्ने जात हो यो । हिउँ नपर्दा के के नपुगेजस्तो लाग्दो हो यिनलाई !
आँखाको भाषा बुझ्न खोज्दाखेज्दै नाउरजोडी लाग्यो आफ्नो बाटो । हामी पनि लाग्यौँ आफ्नै बाटो ।
फलामे पुल तरेपछि काङ ला पहाडको स्पर्श ग¥यो पैतालाले । अब भन्ज्याङसम्मकै बाटो उकालो र ठाडै उकालो । पदयात्राको सबैभन्दा कठिन खण्डको क्लाइमेक्स पनि ।
चट्टानी पहाड र श्वेत हिमशैलको नाङ्गो संसारमा आइपुेगका छौँ हामी । बतासले बतासकै छिनोमा बतासको घन ठोकेर पहाडका चट्टानलाई चोइट्याइदिएको छ । र, बाटैभरि ढुङ्गैढुङ्गा वमन गरेका छन् पहाडहरूले । हिँडिरहेका छौँ ढुङ्गाको बाटो, तरिरहेका छौँ ढुङ्गाकै नदी । खिइँदाखिइँदै कुनै दिन पहाड नै ‘कोल्याप्स’ त हुने होइन ? पहाडप्रतिको प्रेम छचल्किरहेको छ मभित्र ।
काठमाडौँमा भए निकै काम आउँथे ती ढुङ्गाहरूको । घरहरू बन्थे÷ बनाउँथे । सडकका खाल्डाखुल्डीहरू पुरिन्थे । लाग्छ– नदीका बालुवामा जस्तै कतिको साम्राज्य चल्थ्यो होला ढुङ्गामा । साम्राज्य त चल्ने नै भयो नि ! नेताहरू माफियाजस्ता र माफियाहरू नेताजस्ता भएपछि ।
यार्सागुम्बा टिप्ने बेलामा कसै न कसैको साम्राज्य त यहाँ पनि नचल्ने कहाँ हो र ! वर्षको एकचोटि डाँडापाखा ढाकिन्छ मान्छेहरूले । पहाडको रौनक बढ्छ केही दिन । अनि किरा बेचेरै करोडपति हुन्छन् मुठ्ठीभर मान्छेहरू ।
सिजनको अन्त्य भइसकेकोले विदेशी पदयात्रीहरूको आवतजावत थिएन । हिमानीमार्गमा हिजो पोर्तुगालीहरूले कोरिदिएको पदचिह्न पछ्याइरहेका थियौँ हामी । शून्यतामा आफैँलाई पाइरहेको महसुस हुन्छ । आनन्द पनि अति नै । अलकापुरी त होइन ! भन्ने भान हुन्छ ।
तृणरहित पहाडहरूका खैरा, नीला र काला रङ । घामले चम्किएका हिमालहरूका सेता रङ । गर्वानुभूति भइरहेको छ यतिखेर, प्रकृतिको रङहरूमा लुटपुटिएर हिमालहरूको भव्यता चियाउँदा । आफूसँगै ल्याउन मन लाग्छ प्रकृतिको त्यो सौन्दर्य ! लाग्छ– आफूसित समय भइदिए, बन्दोबस्तीका सामानहरू भइदिए, पेन्टिङ कला र साथमा सामग्रीहरू भइदिए त क्यामरामा तस्बिर कैद गर्नु भन्दा आरामले कागजमा उतार्थेँ ती तमाम दृश्यहरू ।
आयो पदयात्राको ठाडो रेखा । एउटै गतिमा बढ्दै छ, मुटुको धड्कन र श्वासप्रश्वास । खुट्टाको गति घटेर नौ महिने बालकजस्तै भएको छु म । त्यही बेला कटक्कै काट्यो मेरो पेट । अघिल्लो दिन लन्च र डिनरले पेटको थैलो भर्दा खुर्सानीको अचार पनि जाकेको थिएँ । आफ्नो प¥यो च्वासे जिब्रो । पिरो नखाए भात नरुच्ने । खाए बाटोमा यसरी सताउने । साला गाइड जिन्दगी ! पैट्याइदिएँ मैले पेटको भकारी । लौजा त ......।
मभन्दा पछि भएका जयनाथले उछिनिसकेका थिए त्यतिबेलासम्म । लामखुट्टे म्याक्सिम त मल्लो थलीमा पुगिसकेका थिए ।
प्रत्येक पन्धपन्ध्र पाइलामा पन्ध्र सेकेन्ड विराम गर्दै उकालो तुर्न खोज्दै छु म । एकएक घुट्को गर्दै बोत्तलको पानीले घाँटी भिजाउँदै छु । मितव्ययिता त अपनाउनै प¥यो ! बोत्तल रित्तिहाले हिउँ चाट्नुको विकल्प छैन फेरि ।
अनौठो अनुभूति भइरहेछ पहाडहरूको उचाइलाई जित्दा । पहाडमात्र होइन, कतिपय हिमाल पनि पुड्का देखिन्छन् मभन्दा । यस्तो लाग्छ– काङ लातर्फ उकालिँदै गर्दा म अग्लिँदै छु र हिमालहरू होचिँदै छन् । म हिमाल चढिरहेको छु र हिमालहरू बेसी झरिरहेका छन् । फुरुङ्ग हुन्छ मन । आज धेरै माथि छु जस्तो लाग्छ, आकाशभन्दा पनि माथि । भारतीय गायिका कविता कृष्णमूर्तीले गाएको गीत गुन्गुनाउन थाल्छु म–
‘आज मे उपर, आसमा निचे
आज मे आगे, जमाना हे पिछे..............’
भन्छन्– ‘थाके विश्राम गर्नू तर कहिल्यै नरोकिनू’ रे । उकालोको यात्रा निरन्तर थियो । भलै मेरो आफ्नै कछुवा गतिमा परिणत भएको छ । उचाइमा थोरङ लाभन्दा सय मिटर कम छ काङ ला तर उकालोको कोण थोरङ लाको भन्दा बढी र बाटो पनि साँघुरो । केही गरी चिप्लिहाले शरीर काङ ला फेदी नपुग्दै प्राणपखेरु चाहिँ सीधै माथि पुगिसक्ने । लाग्छ– ‘एडभेन्चर ट्रिप’ हो, यत्तिको ‘थ्रिलिङ’ त हुनै प¥यो नि !
घोडा लिएर ओलँर्दै गरेका एक युवक भेटिए । आइस क्लाइम्बिङ गर्न आएका गु्रपको लागि व्यवस्थापन गर्न आएका थिए उनी ।
“अब एकै छिन हो भन्ज्याङ पुग्न ।” सान्त्वनास्वरूप उनले मलाई भने । सायद उसलाई टिठ लाग्यो होला मेरो थकित अनुहार देखेर ।
गोरेटोमा लेसिएको थियो पग्लँदो हिउँ । सबैले टेकिसकेको हिउँमा टेक्दै थिएँ म । जुत्तामा लगाउनु पर्ने क्य्राम्पोन रुकश्याक भित्रै छ । उँभो जानुभन्दा पाइला उँधोतिरै सथ्र्यो घरीघरी । अलिकति सहारा दिएको छ लट्ठीले । यस्तै हुन्छ, पछिपछि हिँड्नेको हविगत । एक्लै हाँस्न विवश थिएँ म !
पेटको भकारी रित्तिएपछि सम्झेँ उही नीमा दाइ र शान्ति दिदीलाई । नीमा दाइले त भनेका थिए– बिहान ‘पोरिज थपेर खानू ।’ आफूलाई रुचि भएन त के गर्नु ! उनले दिएको अण्डा र रोटी त साथमा छ नि तर एक्लै के खानु !
अलिमाथि पुगेपछि आयो थली । थलीको कुनामा जमेको छ काङ ला हिमताल । ‘घाङ्ले छो’ पनि भनिन्छ यसलाई ।
“असारमा मेला लाग्छ । पूजापाठ हुन्छ । मीत लगाउनेहरू यहाँ आउने गर्छन् त्यो दिन ।” अघिल्लो दिन नार गुुलुङको धर्मशालाका चिया पसले पुञ्चोक ठिन्लेले भनेका थिए ।
ताल तालजस्तो थिएन, सिसाजस्तै थियो । नजमेको भए त ढुङ्गा फ्याँकेर तरङ्ग निकालिदिन्थेँ र एक क्षण भुल्थेँ म आफैँ पनि त्यसैमा । हिमताल हुनुको विवशतालाई बुझ्छु म ।
त्यहाँबाट देखियो काङ ला भन्ज्याङमा बताससँगै बयली मारिहेका ध्वजाहरू । तन्कँदै थिए ती लुङ्दरहरू मेरो थकित देहलाई समाउन । काङ लाको छेउछाउमा पुगिसकेका थिए म्याक्सिम र जय । हावाको झोकाले मेरो ओँठको लिप बामलाई पनि छेडिसकेको थियो । पटपटी फुटेको ओँठमा जिब्रो दल्दै थिएँ म ।
उचाइ र थकाइले मेरो बोल्ती बन्द भइसकेको थियो । फेरि बोल्नु पनि कोसित ! सहयात्रीहरू त भन्ज्याङ पुगिसके ।
पुगेँ म पनि तातेताते गर्दै ।
बोर्डमा लेखिएको थियो– ‘काङ ला पास (५,३२० मिटर) ।’ ढुङ्गामा कोरिएको छ बुद्धको आकृति । मनको खादा चढाएँ मैले काङ लालाई । टुसुक्क बसेँ म केही बेर काङ लाको काखमा । यतिखेर हामीले बादल तोडेका थियौँ, आकाश जितेका थियौँ । काङ ला टेकेको अर्थमा खुसी बाँड्यौँ हामीले । अङ्कमाल ग¥यौँ । चिच्यायौँ । काङ लालाई अँगालो हाल्यौँ । नाङ्गो पहरासँगै टाँसिएर तस्बिर लियौँ विभिन्न पोजमा र ग¥यौँ मेजमानी काङ लाले पस्केको चिसो सिरेटोको ।
काङ ला हिमाल(५,३९९मिटर)को नाकको डाँडी नै हो– काङ ला भन्ज्याङ । नार र ङवालको जीवनलाई जोडेको छ यसले । कति जीवनलाई जोडेका छन् भन्ज्याङहरूले । म सोच्छु– मान्छेको मन र जीवनलाई जोड्न यस्ता सुन्दर भन्ज्याङनै चाहिँदोरहेछ ।
आरोहणमा हल्का कठिनाइ हुनु त सामान्य कुरा हो । फेरि उचाइ चुम्दाको आनन्द बेग्लै । ज्यानमा तुरुन्तै शक्ति रिचार्ज भएर मन हाँसिहाल्ने । अन्नपूर्ण–२, गङ्गापूर्ण, अन्नपूर्ण–४ र तिलिचो पिकले आफ्नो दिशा परिवर्तन गरेर हेरिरहेको थियो काङ ला पासको हाम्रो आगमनलाई । यति नजिकबाट कहिल्यै देखेको थिइनँ मैले ती चुलीहरूलाई एकै पटक एउटै बिन्दुबाट । एकै फड्कोमा तिनलाई भेट्न सकिन्छ भनेझैँ लाग्थ्यो । हिमाल पनि थरीथरी आकृतिका ! कोही स्तुपाका शिखाराजस्ता । कोही मन्दिरका गजुरजस्ता । कोही हिमाल सेतो दरबारजस्ता । फेरि यस्तैयस्तै आकृतिका अर्कोतिर अग्लिएर उभिएका छन्– हिमलुङ, सारिबुङ, कङ्गारु र पिसाङलगायतका अनेक बेनामे चुचुराहरू । हिमालैहिमालको हिमाल देख्दै थिएँ म– उठेको धर्तीमा । अझै पनि जारी छ– करोडौँ वर्षअघि भारतीय प्लेट र युरेसियन प्लेटको टक्करबाट सुरु भएको हिमालको अग्लिने क्रम  ।
सम्झेँ– ‘एउटा ठूलो पहाड चढेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि चढ्नका लागि अझ थुप्रै पहाडहरू बाँकी छन् ।’ नेल्सन मण्डेलाकै हो कि जस्तो लाग्छ यो भनाइ । काङ लासम्म पुग्दा धेरै पहाडहरू चढिसकेको थिएँ । चढ्नकै निम्ति त अझै अनगिन्ती पहाडहरू छन् यहाँ । नेपालमा भएभरका चुचुराहरूमा पाइला टेक्ने पहिलो ब्यक्ति भएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन पाए ! स्वैरकल्पना मेरो ।
साँघुरो गरी बसेको छ काङ ला भञ्ज्याङ, साथमा ‘काङ ला पास’ लेखिएका फलामे पाटी र मान्छेले नै थमाइदिएको लुङ्दर च्यापेर । प्रकृतिले हिउँको गजुर र हिउँकै खादा ओढाइदिएको छ काङ लालाई । हिउँकै सिरक ओढीबस्छ काङ ला, विशाल चट्टानी भित्तामा टाउको थामेर । समयक्रमले फेरि नङ्ग्याइदिन्छ काङ लालाई । दुःखका पलहरूमा आफनै पैताला भिज्ने गरी गहबाट काङ ला हिमतालमा आँसुका थोपाहरु चुहाएर त्यही आँसुको ऐनामा आफ्नो प्रतिविम्ब सँगाल्छ काङ लाले । काङ ला नामको हिमालको लाचार छायाँ हुनुको नियति भोगिरहेछ काङ लाले ।
मैले गरिसकेको थिएँ गर्नुजति अनुभूति । हिउँफूल बनेर टाकुराभरि छरिएझैँ । नार र फुखोला भई बगेझैँ । घामको रक्तिम किरण बनेर चट्टानी पहाडका छातीछातीमा लेपिएझैँ । स्नो फिन्ज र ग्रान्डाला बनेर कावा खाएझैँ । कुहिरोको भुल्का बनेर खुला आकाशमार्गमा घुमेझैँ । चुलुको झरना भएर पहाडबाट फाल हालेझैँ । यस्तै कल्पना गरेँ यात्राभरि । खुसीको सीमा थिएन प्रकृतिको लयमा डुब्दा ।
हेर्दाहेर्दै कति छिटो घामले पनि उछिनिसकेछ हामीलाई । अझै बाँकी नै थियो– अठार सय मिटरको अवरोह । काङ ला भञ्ज्याङबाट भिरालो हिमोढ हुँदै ङवाल खुरमुरिने क्रममा एक्लै गुन्गुनाएथेँ मैले–
उमङ्गका पाइला टेकेँ
इन्दे्रणी सपना सजाउँदै
मनको भूगोल भरिभरि ।
नार–फुले बिछ्याएको हिउँफूल उराल्दैै
बस्तीबस्तीका सौन्दर्य लिएर आँखाभरि
उक्लेँ म काङ ला भन्ज्याङ ।
फुखोलाको सङ्गीतमा बैँस कोरल्दै
नाउरहरू बाटो छेक्न आएको ।
अनि मेरो आस्थाको गोधूली पर्खिरहेको बेला
नढल्दै झम्के साँझ जोङ रि पारिबाट
तन्नेरी जूनले कुत्कुत्याउन आएको ।
तिमीसितको बिछोडले पलपल तड्पिँदा
सकिँनँ मैले बयेली खेल्न बेगिँदो बताससित
यत्रतत्र झुन्डिएका लुङ्दरले जस्तै ।
बरु नापिरहेँ नारपा भूमि
थकित पयर घिसारेरै ।